नेपालमा जिकाकाे जाेखिम कायमै (भिडियोसहित) – Himalaya TV
Home » समाचार » नेपालमा जिकाकाे जाेखिम कायमै (भिडियोसहित)
नेपालमा जिकाकाे जाेखिम कायमै (भिडियोसहित)
४ मंसिर २०७५, मंगलवार १२:५८
कमला गुरुङ/काठमाण्डौ, ४ मंसिर ।
जिका भाइरसको संक्रमणबाट नेपाल जोखिममा हुनुका पछाडि दुई कारण छन् । पहिलो छिमेकी मूलुक भारतमा जिका भाइरसको स‌ंक्रमण देखापर्नु र दोस्रो लामखुट्टेको टोकाइबाट रोग लाग्नु । यो रोग डेग्यु सार्ने एडिस लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्छ । र, यस्ता लामखुट्टे नेपालमा प्रशस्तै भेटिन्छन् ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. विवेककुमारलाल कर्ण भन्छन्, ”केही वर्ष पहिले डब्लुएचअाेसंग मिलेर हामीले नेपालमा जिका भाइरसकाे जाेखिमकाे बारेमा अध्ययन गरेका थियाैं । नेपालमा याे राेग सर्नकाे लागि वातावरण अनुकूल भएकाे र डेंगु सार्ने लामखुट्टे प्रशस्तै भएकाले हामी जिकाकाे जाेखिममा छाैं ।”
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार भारतसहित ८६ मुलुकमा जिका भारसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । अमेरिकी संस्था सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सनले पनि ९५ बढी मुलकमा स‌ंक्रमण देखा परेको किटान गरेको छ ।
जिका भाइरसको लक्षण अधिकांशमा विकसित हुँदैन । यो नै यसको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । ज्वरो, बिबिरा, आँखा रातो हुनु, मासंपेशी तथा जोर्नीको दुखाइ, टाउको दुख्नु यसका लक्षण हुन् ।
जिका भाइरसको संक्रमणले विशेषगरी गर्भमा रहेको शिशुलाई असर गर्ने सरुवा रोग विशेषज्ञ डा‍. शेरबहादुर पुनले बताए । संक्रमित महिलाले जन्माएको शिशुमा मस्तिष्कसम्बन्धी जन्मजात दोष देखिन्छ । मस्तिष्क सानो भएका शिशु जन्मन्छन् । गर्भ तुहिने, मृत जन्म र समय नपुगी जन्मने हुन्छ ।
”जिका भाइसरबाट बच्न पूर्वसर्तकता अपनाउन चिकित्सको सुझाव छ । याे डेंगु सार्ने लामखुट्टेकाे टाेकाइबाट सर्ने भएकाले लामखुट्टे हुर्कने वातावरण नै बन्न दिनु भएन । यसकाे लागि पानी जम्न नदिने, सरसफाईमा ध्यान दिन अावश्यक हुन्छ “, डा. पुनले भने ।
जोखिमबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाइएको सरकारको दाबी छ । देशभरका सरकारी अस्पतालसँग यस विषयमा सहकार्य गरिएकाे महाशाखाकाे भनाइ छ । डा. कर्णका अनुसार काेही बिरामी यसकाे मिल्दाेजुल्दाे लक्षण लिएर गए भने चिकित्सकले हामीलाई जानकारी गराउँछन् । ”हामीलाई साप्ताहिक रूपमा जानकारी अाउँछ ”, डा. कर्णले भने, ” विशेषगरी गर्भवती महिलालाई हाम्राे निगरानी हुन्छ । तर जिकाकै संक्रमणलाई जाँच गर्ने किट हामीसंग उपलब्ध छैन ।”
अहिलेसम्म देखिएको छैन भनेर जिका भाइरसलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । त्यसैले यसबाट बच्न सरकारले मात्रै होइन तपार्इं हामीले पनि उत्तिकै सर्तकता अपनाउनुपर्छ ।